GoodData: SaaS amin'ny fangatahana fitsikilovana orinasa. Martech Zone
Alarobia 29, 2012 Alakamisy Febroary 25, 2016 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra antsika, dia tototry ny angon-drakitra izahay. Omaly fotsiny aho dia namorona tatitra momba ny fandrosoana SEO izay nitondra ahy fanarahana laharana, Data momba ny webmaster, Angona Google Analytics ary Hubspot hampidirina ireo metrika manan-danja sy hampifanarahana ny tatitra mba hahazoana antoka fa marina izany.
Ny vahaolana momba ny Business Intelligence (BI) dia efa teo amin'ny sehatry ny Enterprise efa elaela ary matetika dia fametrahana mpanjifa / mpizara miaraka amina vanim-potoana maharitra… indraindray taona maro. Ny vahaolana BI dia ahafahako mamoaka ny angona avy amin'ireo rafitra tsirairay ireo ary manangana tahiry afovoany iray izay manivana, manova ary maneho ireo data amin'ny endrika azo ampiasaina kokoa.
GoodData dia lozisialy ho toy ny lozisialy momba ny serivisy momba ny serivisy amin'ny serivisy miaraka amin'ny fahafaha-mitondrana singa tsy mitovy data, manotra izany data izany, ary mampihatra dashboard, tondro fampisehoana fototra (KPI) ary fanaovana tatitra. Ity misy mpanjifa miresaka amin'ny fampiasana GoodData hamolavola mora foana ny tatitra sy ny refy. Aza hadino ny mijery Fantsona Youtube an'i GoodData - manome webinar sy fampisehoana an-taonina amin'ny fomba fampiasana tanteraka ny sehatra misy azy ireo.
Araka ny voatanisa ao amin'ny pejy fisongadinana, ireto ny fiasa manasongadina ny GoodData:
Dashboard sy tatitra - Alao sary an-tsaina ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny tatitra vita anaty tafondro vita am-bifotsy na mavitrika amin'ny tabilao na tabilao. Mankanesa amin'ny sidina miaraka amina totozy. Farito ny modely fanaingoana fanao mahazatra sy mifototra amin'ny fitsipika, atsofohy ao anaty na manerana ny sela, farito ny agregat ny tsanganana ao anatin'ny segondra, mahazo statistikan'ny faritra spreadsheet eo noho eo amin'ny alàlan'ny fanasongadinana ny totozy, hisintona ary hampidina ny fanamafisana ny axis amin'ny tabilao ary hifehezana ny fihodinan'ny marika tsirairay.
Fepetra sy mari-pamantarana fampisehoana lehibe - GoodData dia mamela ny mpampiasa hampiakatra ny herin'ny metrika efa voafaritra efa am-polony. GoodData koa dia afaka mamorona metatra manokana izay miatrika toe-javatra tsy manam-paharoa amin'ny asa aman-draharaha, mamaritra ny KPI ary manara-maso ny zava-bidy mifanohitra amin'ny tanjona.
Ad Hoc Fanadihadiana - Manaova fizahana fironana amin'ny sarin-tsary miorina amin'ny fotoana. Ny angon-drakitra sy ny dadu amin'ny alàlan'ny interface "inona ary ahoana" azo ampiharina ary farito ny metatra, sivana manerantany / eo an-toerana, maro hafa. Ampiasao ny mpanampy sivana hametahana azy ho azy amin'ny fisafidianana, laharana, elanelana na sivana miovaova. Manaova famakafakana inona-raha amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana na midina sy maloto amin'ny fiteny maro sy lehibe azo vakina.
Fiaraha-miasa sy fizarana - Miaraha miasa sy mizara tetik'asa, tatitra ary valiny amin'ireo mpiara-miasa sy mpitantana amin'ny fotoana tena izy. Hanara-maso sy handinika ny tantaran'ny tetikasa. Ataovy an-tsoratra ary asio marika ireo tatitra momba ny sidina. Asao ny olona hiditra amin'ny tetikasanao hiady hevitra sy hizara ny fandrosoana. Amporisiho ny handray anjara amin'ny fotoana tena izy. Hampidirina na handefasa ny tatitra sy ny mailaka amin'ny tabilao fizarana.
Fampiharana efa namboarina mialoha - Ny fampiharana GoodData dia mifandray amina loharanom-pahalalana mahazatra toy ny Google Analytics, Salesforce ary Zendesk, ary satria izy rehetra dia miorina amin'ny sehatra GoodData, azonao atao ny manitatra azy ireo mora foana amin'ny alàlan'ny fampidirana angon-drakitra na fandrefesana ireo metika izay taratry ny fepetra takian'ny orinasa tsy manam-paharoa.
Raha teknolojia an-tserasera misy data ianao, dia mety ho lasa a mpiara-miasa amin'ny data miaraka amin'ny GoodData. GoodData dia manolotra ny fahaiza-mivelatra feno Analytics vokatra an-tsena ao anatin'ny 90 andro tsy misy ezaka lehibe amin'ny injeniera. Ny mpanjifanao dia mahazo fidirana feno amin'ny sehatra GoodData rehetra: dashboard efa namboarina, sary an-tsary mandroso, slice ary dice, metrika manokana, fiaraha-miasa ary maro hafa.
Tags: biraharaham-barotra ny faharanitan-tsainagooddataMarketing Webinarsaasrindrambaiko ho serivisy